Ekpere Ngọzi nke ụbọchị. ? Nata ụdị ngọzi niile
Ekpere nke ngozi ọ ga-anọrịrị n'ọnụ anyị ebe niile ebe ọ bụ na anyị ga - eme ya ka ọ bụrụ ogwe gbara anyị gburugburu ebe ihe ọma ndị ahụ nwere ike ịbanye.
Okwu Chukwu kowara anyi na ngozi nke Chineke adigh agbakwunye ihe nwute obula, nke a bukwara isi iji choputa ngozi ndi sitere na Chineke na adighi. N’okwu a site n’ime ekpere ndị a, anyị nwere ike ikele, gọzie onwe anyị ma ọ bụ onye ọzọ ma ghọta ike nke Chineke na ndụ anyị.
1 Ekpere nke ngozi
2 1) Ekpere ka inata ngozi niile
3 2) Ekpere nke ngozi nke ubochi
4 3) Ekpere nke ngozi nke Chineke
5 4) Ekpere iji kelee Chukwu maka ngozi niile
5.1 Ekpere ngọzi a, dị ike?
Ngọzị bụ uru anyị niile chọrọ ma ọ bụ chọrọ ịnara oge niile na ndụ anyị.
Ọtụtụ mgbe anyị na-anara ha naanị anyị, ọbụnadị na-amaghị ya, mgbe ụfọdụ anyị ga-arịọ maka ma ọ bụ lụọ ọgụ maka ha, n'echiche nke a, ekpere ngọzi na-aghọ ngwa ọgụ dị egwu anyị nwere ike iji oge niile.
1) Ekpere ka inata ngozi niile
Ana m arịọ gị ka ị gọzie m,
gọzie ihe niile m metụrụ aka taa,
Gọzie ọrụ m ma nyere m aka ịme ya nke ọma, ọ bụghị imehie ihe.
Gọzie ndị mụ na ha na-arụ ọrụ;
Nna, gozie echichem na mmetụtam.
ka ị ghara iche echiche ma ọ bụ iwe iwe,
ya mere na ihe niile dị n’ime m bụ naanị ịhụnanya;
gọzie okwu m ọ bụla,
Ghara ikwu ihe m ga-emecha kwaa mmakwaara.
Gọzie kwa sekọnd ọ bụla na ndụ m.
ya mere, iji ya were ya, m ga - ewere ihe gị na okwu gị gwa ndị niile chọrọ ya.
Gọziem, Onye-nwe-ayi, ka m we buru n’oyiyi gi na onyinyo gị,
iweta ihe ziri ezi nye mmadụ niile
na ihe gbara m gburugburu na nke mere na ị gọziri ha niile.
A na m arịọ gị ka onye ọ bụla n’obi m gọzie gị,
Mọ Nsọ na Nwa-ab Virginọghọ nāmaghi nwoke;
Ngọzị n’ịhụnanya, ahụike, el dinero, ezinụlọ, ọrụ, azụmaahịa, maka onye ezi na ụlọ, maka ụmụaka na ịhapụ ụlọ anyị kwa ụbọchị, ngọzi dị mkpa n'akụkụ niile nke ndụ anyị.
Ọ dị mkpa ịmara otu esi ewulite ezinụlọ ma ọ bụ ụkpụrụ nke ime ekpere a kwa ụbọchị ma ọ bụ ọbụna otu ugboro n'izu. Anyị nwekwara ike ịkụziri ya ụmụ anyị na ndị ezinụlọ anyị ma otu a mee ka okwukwe nke ezi na ụlọ sie ike ma sorokwa ha nọrịa.
2) Ekpere nke ngozi nke ubochi
Nna g’eji ike ime ihe nile,
Ana m ekele gị maka ụbọchị ọhụrụ a,
ebe omumu nke anyanwu, m na ncheta nkem na ijeghari ya.
Enwere m ohere ịbịaru gị nso, ịbụ ezigbo sava karịa ka m dị ụnyaahụ.
Ana m ekele gị maka ezinụlọ ị tinyere m,
maka ndị enyi m na-eduzi m maka ịdị mma
na ihe ọ bụla na-eduga n'ụzọ gị, nke na-anọchite anya ihe dị mma na ndụ m.
Gi Onye-nwe-ayi, otuto.
onye ọ bụla n’ime nzọ-ụkwụm nile, ịbụ ihe nlere-anya nke obi-ọma gị
Maka ndị niile na-ahụ n’ụzọ.
Ire m na egbugbere ọnụ m na olu m,
nke mere na ha bụ ndị na-agbachitere okwu gị na ndị na-enyefe ya.
Gba m ọbara gị dị nsọ n'aka m,
Ka ha jupụta na nrube isi gị nke Chukwu, Ka e wee gọzie ọrụ m.
Ka ọ bụrụ ọ yourụ gị nke metụrụ m n'obi, ọ bụ agbụrị ụwa ịmara na abụ m ohu gị kwesịrị ntụkwasị obi,
ma n'ụzọ ahụ bụrụ ngwa ọrụ nke udo nke Chineke gị.
Etinyewo m gị ihe ọ bụla m bụ taa na ụdị m ga-adị,
wee kpụzie m ka ọ bụrụ ihe oyiyi gị na mmasị gị,
n'ụzọ dị otu a ịdị ka gị, maka ndị gị,
ka ewe nye kwa aha-Gi otuto n'elu ebe ọ bula Ọ nāgabiga.
A na m arịọ nke a n'aha nke Nna, nwa nwoke na nke Mmụọ Nsọ.
Ekpere nke ụbọchị taa dị ebube.
La Ngọzi nke ụbọchị bụ ihe anyị ga-alụ kwa ụbọchị. N’ezie, mee ya n’ụtụtụ ka ụbọchị dum gọzie. Peoplefọdụ ndị na-amụnye kandụl pụrụ iche iji kpee ekpere a, n'agbanyeghị nke ọ nwere ike ịme n'oge ọ bụla na ebe ọ bụla.
Ihe atụ nke ekpere nke Nna anyị nke anyị hụrụ n’ime Akwụkwọ Nsọ na-akuziri anyị na anyị ga-arịọ maka nri anyị kwa ụbọchị nakwa na achịcha na-egosikwa ngọzi niile anyị nwere ike ịrịọ ma ọ bụ ọbụlagodi ndị anyị na-amaghị ihe anyị chọrọ kama na Onyenwe anyị maara.
3) Ekpere nke ngozi nke Chineke
"Ekele m Chukwu maka inye m ngọzi nke inwe otu ụbọchị,
Daalụ n’ihi na taa apụrụ m ịhụ ọzọ ma ihe okike gị na ịhụnanya gị dị ukwuu.
Taa, a bụ m onye obi ụtọ,
ndabara na ekele maka inwe ohere ọhụụ iji were ụbọchị nke zuru udo,
Lovehụnanya, nchebe na nke kachasị mkpa, nduzi gị.
Onye-nwe, nye m ike imeri nsogbu ọ bụla na-aba n’ụzọ m,
Mee ka m nwee ume na ume dịka gị,
Mee ka ịhụnanya gị kpuchie ndụ m niile na ndị niile gbara m gburugburu na ụzọ m.
Nna nke igwe,
Daybọchị ọ bụla nke na-amalite, ana m ekpe ekpere na ị ga-ege m ntị ma jiri mmesapụ aka na obiọma gị meghachi omume.
Ama m na mkpụrụ obi m chọrọ gị ụbọchị niile, ị na-enyekwa m ngọzi niile.
Inwe ike ibuli ekpere nke ngozi si n’aka Chineke gozie aha Chineke ma juo ya ka o gozie anyi aghaghi ibu uzo anyi n’eji n’ekpere anyi.
Anaebu ụzọ rite ngọzị nke Chukwu n'ógbè nke mmụọ ma ahụ Nke ahụ bụ ụzọ anyị ga - esi gbagha ọgụ maka ihe anyị chọrọ inweta, nke ahụ naanị ka anyị nwere ike nweta.
4) Ekpere iji kelee Chukwu maka ngozi niile
Inye ekele bu ihe bara uru na oge osisi vaịn ma elebara ya anya dika ihe efu mana onye nwe oma n’okwu ya gwara anyi na anyi kwesiri inwe ekele.
Enwere akụkọ banyere otu ọrụ ebube nke Jizọs mgbe ọ gwọtara ndị ekpenta iri ma ọ bụ naanị otu bịaghachila ikele, ndị nke ọzọ gara na-anụ ụtọ ndụ nwere ahụike zuru oke, nke a na-akuziri anyị etu anyị nwere ike isi bụrụ onye enweghị ekele. naanị mmadụ iri ga-alaghachi, nke ahụ kwesịrị ịbụ anyị, na-eburu n'uche oge niile na ekele maka Chineke maka ngọzi ndị anyị na-enweta n’aka ya.
Naanị imeghe anya anyị ụbọchị ọhụrụ, iku ume ma nwee ezinụlọ anyị, bụ obere ihe nke ọtụtụ mgbe anyị na-echefu ikele Chineke. Ka anyị mụta inwe ekele ma bulie ekpere nke ekele kwa ụbọchị maka ngọzi niile anyị natara
Ekpere ngọzi a, dị ike?
Ekpere ahụ nke dị ike bụ nke a na-eji okwukwe eme n'ihi na ọ bụ naanị ihe achọrọ n'aka maka ekpere anyi Gee ya.
Ọ bụrụ na anyị jiri obi abụọ jụọ ajụjụ ma ọ bụ ịchọ ọdịmma onwe anyị naanị, na-ekwenyeghị na Onyenwe anyị nwere ike inye anyị ihe anyị na-arịọ, nke ahụ bụ ekpere na-enweghị isi nke na-agaghị emezu nzube ya. Na enweghị okwukwe ọ gaghị ekwe omume ime Chineke obi ụtọ, nkuzi dị ebube nke dị na Akwụkwọ Nsọ nke anyị ga-echetarịrị mgbe niile.
Faith na enwe okwukwe mgbe niile mgbe ị na-ekpe ekpere nke ngọzi ụbọchị nye Chineke na ịnata ụdị ngọzi niile.
Ike ekpere nke ọbara Kraist